Wax walba oo ku saabsan Trenbolone Enanthate Powder | AASraw
/blog/Gallery/Dhamaan waxyaabaha ku saabsan Trenbolone Enanthate Powder
Posted on 02 / 20 / 2019 by 阿斯劳 ku qoray Gallery.
Ma waxaad ka fekereysaa inaad ka mid noqoto xoogaa xoog ah ee steroids ee nidaamka jirka jirka? Hagaag, Trenbolone enanthate budada waxay noqon kartaa habka aad u tagto. Ka fiiri dhinacyada muhiimka ah ee daroogada, faa'iidooyinka, waxyeelada, iyo sida loo iibsado.
Marka hore, Trenbolone wuxuu ahaa daawo caafimaad oo afka ah oo caafimaadka xoolaha ah si loo hagaajiyo guulaha muruqa xoolaha. Waxay markii ugu horraysay timid intii lagu jiray bartamaha-60s iyada oo loo marayo shirkad Jarmal, Hoechst-Roussel. Warshaduhu waxay calaamadeeyeen alaabadooda caafimaadka xoolaha, Finajet. Isla mar ahaantaana, Trenbolone budo budo ah ayaa mawduuc ka ah cilmi baarista Los Angeles ee Jaamacadda California.
Wax soo saarkan Tren Ace Jarmalku wuxuu heley caan ah illaa iyo inta laga joojinayo 80s. Dhowr sano ka dib, warshad kale oo warshad ah oo Faransiis ah ayaa la timid bacad-bini-aadanimo hexahydrobenzylcarbonate (Parabolan) oo hoos imanaysa magaca caanka ah, Negma. Nasiib darro, tani sidoo kale waxaa lagu mamnuucay 1997.
Ugu dambeyntii, Enenthate Trenbolone wuxuu u muuqday mid ujeeddo leh xayeysi madax banaan oo lagu magacaabo 2004 oo leh calaamad calaamadeysan, trenabol. Shirkadda 'Dragon Company' ayaa soo saartay steroid ahaan sheyga sheyga ee dhulka hoostiisa. Inkasta oo shirkaduhu ay ka baxeen ganacsiga 2006, haddana calaamad ayaa weli laga helayaa suuqa madow.
Halka Tren A labadaba sida daroogada daroogada iyo daroogada daroogada, Tren E iyo Parabolan waxay si adag u yihiin isticmaalka aadanaha.
Waa maxay Trenbolone Enanthate Powder?
Trenbolone enanthate waa aal macmal ah oo leh CAS lahayn 10161-35-8. Waa walax cayriin, oo muujiya sifooyinka anabolic iyo androgenic labadaba. Budada Tren E waa C17β enanthate ester, waxayna ka soo baxday nandrolone (19-taortestosterone).
Sida Deca Durabolin, Tren waxaa ka maqan aalado kaarboodi ah oo ku yaala 19th. Si kastaba ha noqotee, qaab dhismeedka gaarka ah ee dhismuhu wuxuu ka kooban yahay labada xargo oo labadaba labadaba 9th iyo 11th.
Waxaa jira saddex nooc oo Trenbolone ah oo iib ah, waxaanan sharxi doonaa sida ay u kala duwan yihiin. Guryaha labada dhinac ee ka dhexeeya xeryahooda waa astaanta kiimikada iyo hoormoonka. Si kastaba ha noqotee, waxay ku xiran tahay naqshadeeyaha iyaga u sheega.
Qiyaasuhu wuxuu xakameynayaa hawsha sii deynta ee hormoonka Trenbolone ee jirka. Isbarbardhig degdeg ah oo u dhexeeya trenbolone acetate iyo farshaxaniinta ayaa muujinaya in qofka dambe uu leeyahay nolol badhkeed oo uu si dhaqso ah u dhaqmaa kii hore. Wixii Tren E, qiiqa enanthate wuxuu ku jiraa kooxda 17-beta-hydroxyl ee qaabkeeda. Saldhigga Trenbolone waa nooc kale, inkastoo ay ka maqan tahay aaladda.
Isticmaalkii ugu muhiimsan ee Trenbolone enanthate budada ayaa ku jira soo saaridda steroids anabolic. Waa la isku halleyn karo, shan jeerna way ka awood badan tahay testosterone. Asal ahaan, waxay ka dhigan tahay haddii aad qaadato 200mg oo kaliya Tren E, saamaynta iyo natiijooyinka waxay ku xirnaan doonaan qof kale oo isticmaala 1000mg of testosterone
Trenbolone Enanthate Hormoonkaas
Qiimeynta Anabolic 500 100
Qiimeeynta Androgenic 500 100
Trenbolone Enanthate iyo Trenbolone Acetate
Labadan steroids waxay ku dhow yihiin isku mid, laakiin farqiga ayaa ku yimaada xagga awoodda iyo xawaaraha waxqabadka. Qiyaasta nuugista iyo soo-saarista ee Tren A ayaa ka dhakhso badan tan dhiggeeda ah, sidaa awgeed, nolosha nren trenbolone acetate ee gaaban. Sababtaas awgeed, jidhkaaga ayaa diiwaangelin doona natiijooyinka wanaagsan ee trenbolone enanthate oo ah heer guntiyo ah.
Faa'iidada koowaad ee Tren E waa in ay leedahay saameyno yar. Haddii aadan haysan meel jilicsan ee cayayaanka irbadaha, markaa taasi waa habka aad u tagto. Ka dib dhan, qiyaasta waa laba jeer todobaadkii iyadoo Tren Ace u baahan tahay cirbad maalin kasta ah.
Enenthate Trenbolone wuxuu ku haboon yahay qaab-dhismeedka jirka ee steroids tan iyo markii ay dhalinyaradu ku adkaato inay joogteeyaan ama xasiliyaan heerarka dhiigga. Waxay u fiican tahay kuwa ku jira wareega jarida.
Waa maxay Trenbolone Enanthate Powder Used?
Budada Trenbolone waa maaddada ugu muhiimsan ee soo saarista cirbadeynta cayayaanka trenbolone. Qalabka kiimikada waxaa loogu talagalay isticmaalka kiliinikada.
Tren E waa jug ah dhismaha muruqyada, kobcinta jirka, iyo kobcinta waxqabadka jirka ama cayaaraha. Iyada oo steroid this, aad kor u qaadi kartaa tartiib tartiib ah iyada oo aan la helin dufanka jirka aan loo baahnayn. Ugu yaraan, waxay ka mid tahay daroogooyinka yar yar ee aad ku dari kartid inta lagu jiro jarista iyo xajmiga wejiga.
Ka sokow noqoshada steroid naqshadeeye, budada Trenbolone E waa qayb muhiim ah oo cilmi-baarayaasha iyo aqoonyahannada u isticmaalaan cilmi-baarista. Waxay leedahay qiyam caafimaad oo qaas ah, gaar ahaan marka la gooyo daroogada, taas oo wax ka qabta muruqyada bukaanka ee waayeelka waayeelka ah.
Sidee Loo Shaqeeyaa Trenbolone Enanthate Work?
Qaadashada iyo dheef-shiid kiimikaad ee Trenbolone enanthate waxay ku dhacdaa beerka. Daroogadu waxay leedahay ilmo aad u sarreeya oo ah unugyada xasaasiyadeed ee quudinta, kuwaas oo ka masuul ah sifooyinka galmada ee labka. Maadaama aysan aromatize ku darin estrogen, steroid waxay keenaysaa faa'iido murqaha ah.
Joogitaanka Tren E ee jidhka ayaa kordhiya qaadashada ammonium ions by muruqyada iyo hagaajinta xiga ee kuyeelka synthesis. Inkastoo ay ka shaqeyneyso unugyada muruqyada, steroidkani waxay kicisaa rabitaanka cuntada oo waxay yareyneysaa heerka culeyska ama xaaladaha murqaha. Marka laga reebo qabsashada AR, xeradu waxay sidoo kale ku xiraysaa unugyada baruurta, markaa, fududaynta lipolysis.
Iyadoo ay ku jiraan kelyaha, Tren ma geli karo nooc kasta oo wax ka beddel ah, mana jabin karo. Sababtan awgeed, daroogadu wax saameyn ah kuma yeelanayso nidaamka kaadida. Jeexitaanku waa kaadida.
Tani enanthate trenbolone waxay leedahay nus-nololeed u dhexeeya 8 ilaa 12 maalmood. Ahaanshaha Ester dheer, Trenbolone Enanthate wuxuu si tartiib tartiib ah ugu dhaqmaa jirka oo leh qadar gaabis ah. Sidaa darteed, waxay ku sii jirtaa nidaamka bini'aadamka dhowr maalmood ka hor qashinka.
Mudo intee le'eg ayuu Trenbolone Enanthate ku jiraa Nidaamkaaga?
Haddii aad ogaatid nuska-nambarka staboid anabolic, waxa ay noqotaa mid sahlan in la qiyaaso xaddiga waqtiga daroogada ay joogi doonto nidaamka. Muddadaas ayaa sidoo kale loo yaqaan wakhtiga ogaanshaha.
Markaad fuliso tijaabada isteeroydhiska, Trenbolone Enanthate ayaa soo muuqan doonta shan bilood ka dib markaad ka soo baxdo wareegga tareenka. Sababta ayaa ah in dheef-shiid kiimikaadkeedu ku dhacayo xawaaraha snail. Ka sokow, xaqiiqda ah in dhismahani leeyahay astaamo dhaadheer oo la isku duro ayaa ka qayb qaadata dib u dhaca socodka dhiigga.
Haddii aad qaadatid baaritaanka kaadimaad shan bilood ka dib, sambalka wuxuu noqonayaa mid xun. Hase yeeshee, waa in aad maskaxda ku haysaa in steroids kale oo aad noqon doontid inaad ku dhexjirto wareegga gawaarida ay saameyn doonto waqtiga ogaanshaha. Ilaa hadda, ma jiraan wax dacwad ah oo ka dhan ah ciyaartoyda xirfadleyda ku saabsan isticmaalka Trenbolone.
Waa Maxay Faa'iidooyinka Trenbolone Enanthate?
Qarsoodiga ka faa'iideysanaya steroids anabolic waa iyada oo la raacayo taxaddarrada. Waa inaad fahamtaa oo aad miisaantaa khatarta ka hor inta aadan bilaabin wareegga. Si aad u raaxaysato faa'iidooyinka ugu fiican ee trenbolone, hubso in aad si joogto ah u shaqeyso inta aad joogteyneyso cunto diirimaad la'aan ah.
Halkan waa waxa aad ka filanayso tareenka:
Isku-darka borotiinku wuxuu had iyo jeer u dhigmaa cabirka muruqyada jirka. Markay sare u kacdo, muruqyada aad u badan tahay inaad urursato. Waxaa intaa dheer, borotiinnada ayaa ilaaliya unugyada jira waxayna sidoo kale dardargeliyaan howlaha soo kabashada.
Iyada oo ay ku xiran tahay sifooyinka sare ee istrogen-ka ee steroidkan, jirkaagu wuxuu ka jawaabi doonaa koritaanka degdegga ah ee murqaha.
Trenbolone waxay kordhisaa tirada unugyada dhiigga cas, sidaa darteed, iyaga oo awood u leh inay qaadaan nafaqooyin dheeraad ah iyo ogsijiinka. Oxygen-ka ugu sareeya wuxuu u dhigmaa heerarka tamarta sare.
Markaad kor u qaaddo culeyskaaga ama aad sameysid xoogaa jimicsi culus, ma nadiifisid naftaada. Jidhku wuxuu dib-u-xoojin doonaa oo damaanad qaadayaa dulqaadka ugu badan iyo istaandarka.
-Awoodda iyo Kartida
Dhamaadka seddex illaa afar asbuuc gudahood wareegga trenbolone, hubi inaad diiwaangeliso korriin xoog leh. Sababta ayaa ah in daroogadu ay kor u qaaddo istaandarkaaga, waxay yareysaa wakhtiga soo kabashada, waxayna hagaajineysaa dulqaadka. Powerlifters ayaa hubaal ka noqon doona waalidka ku saabsan faa'idadan.
-Hoggaaminaya Nitrogar Joogista
Nitrogirku wuxu hayaa oo kor u qaadaa anabolism, markaa, bilaabista borotiinka kaansarka ee muruqyada. Nidaamkani wuxuu mas'uul ka yahay koritaanka murqaha. Ka sokow, sida jidhku u maleynaayo dawada anabolic, daroogadu waxay xakameysaa habdhismeedka iyo hababka muruqa ee la xiriira.
Unugyada murqaha waxaa ku jira ku dhawaad ​​16% ee nitrogen. Ilaa intaad adigu xajisid qiimahaan, waxaad joogi doontaa anabolic.
Trenbolone Enanthate waxay ka mid tahay stabdhabyada anabolic ee yar, taas oo aan aromatize ku darin estrogen. Sidaa darteed, uma badnayn inaad la kulanto sifooyinka haweenka-u eg markaad ku jirto.
Maxaa keena steroids si loogu beddelo estrogen si sahlan waa joogitaanka atom atom ah ee xNUMXth. Wixii xeryaha 19-nortestosterone, hydrogen wuxuu badalaa aaladaha kaarboon.
Hal wareeg oo kaliya, waxaad ku heli kartaa meel u dhow xaddiga 20. Si ka duwan inta badan steroids ee natiijooyinka ka dhalan miisaanka biyaha, Tren E wuxuu xoojiyaa koritaanka murqaha isla markaa isla markaaba gubayo dufanka jirka ee dheeraadka ah.
Nooca steroidku wuxuu kiciyaa isugeynta koritaanka insulin-1 (IGF-1). Hoormoonka borotiinka wuxuu u shaqeeyaa inuu dib u habeeyo jirka isla markaana u dhaqdhaqaaqo unugyada, dheecaannada, unugyada muruqyada, jooniska, iyo lafaha.
Haddii aad ku jirto wareegga jarista, waxa ugu dambeysa ee aad rabto inaad isku uruursato waa dufanka jirka. Glucocorticoids waxay miisaanaysaa koritaanka murqaha waxayna dardar-gelinaysaa miisaanka. Trenbolone E waxay ku dhaqmeysaa adoo hoos u dhigaya cortisol.
Iyadoo ay sabab u tahay kororka unugyada dhiigga cas, jidhkaaga ayaa xajin kara nafaqo kasta oo aad isticmaashay si ka duwan sida ay u dhacday ka hor inta aadan ku jirin steroid. Ugu yaraan, jidhkaaga ayaa laga yaabaa inuu xitaa xisaabiyo miligram ugu yaraan borotiinka, fitamiino, dufan, iyo carbohydrates aad kudheesho.
Waxtarka quudinta waa mid ka mid ah faa'iidooyinka muhiimka ah ee trenbolone ee ka faa'iideysanaya sterids kale.
-Qalabyada yar ee yar
Marka la raaco Tren E, waxaad muruqyadaada ku dari kartaa laba jeer toddobaadkii. Waa hagaag, faahfaahintan waa war wanaagsan oo loogu talagalay gabdho fara badan.
-Ma aha sun ku ah beerka
Badanaa, steroids dhiska afka ayaa walaac ka qaba cagaarshowga. Ahaanshaha daroogada la isku duro, Trenbolone wuu iska ilaalin doonaa inuu dhex maro beerka inta lagu jiro dawooyinka farmasokokinetics. Haddii ay dhacdo inaad wax ka qabato arrimo beerka ah intaad ku jirtid tareenka, waa inaad eedeysaa xirmooyinka steroid ee aad isticmaaleysay.
-Fat ku gubista
Haddii aadan hubin waxa laga filayo tareenka inta lagu jiro wareegista jarista, halkan waa sheeko bilaash ah. Trenabol wuxuu kaa caawinayaa inaad gubto dufanka dheeraadka ah iyo kalooriyeyaasha. Celcelis ahaan, waxaad lumi kartaa meel u dhow 1% miisaanka jirka ka dib marxaladda.
-Waxay yareysaa waqtiga soo kabashada
Iyada oo Tren E, waxaad sameyn kartaa jimicsi jireed oo aad u culus laakiin weli helitaanka tamarta si aad u sii wado.
A caadiga ah Wareegga Trenbolone waxay socotaa ilaa siddeed toddobaad, laakiin dadka ugu sareeya waxay sameyn karaan toddobaadka XNUM. Hantida ugu yaabka badan ee Trenbolone enanthate waa inaad adigu xariiri kartaa mid kasta oo AAS ah. Waxaad samayn kartaa xargaha si loo yareeyo saameynta loona yareeyo waxqabadka steroidka.
U hubso inaad ku darto tijaabo-bixiyaha xilliyada ka baxsan iyo goynta goynta maaddaama ay ka caawiso in lagu dheellitiro hormoonka caadiga ah ee hormoonka jidhka inta lagu jiro PCT. Dadka isticmaala muddada dheer, ee ka soo horjeeda Dianabol ama Anadrol waxay saameyn togan ku yeelanayaan waxqabadkaaga. Si kastaba ha ahaatee, iska hubi inaad xadido qiyaasta xeryahaan la kariyo oo aanad sii xumeynin dhibaatooyinka soo raaca.
Haddii aad adigu xakameyneyso wareegga E Tren E, waxaan kugula talinaynaa Primobolan, Masteron, iyo Halotestin. Winstrol, testosterone enanthate budada, iyo Anavar waxay si fiican isugu dhejiyaan tareenka wareega wareegga.
Dhamaadka marxaladda Trenbolone, waa inaad ku darsataa afarta asbuuc ee soo socota daaweynta wareega boostada (PCT). Ku guul daraysta in sidaas la yeelo lagama yaabo in ay hoos u dhigto heerarka testosterone, waxay dhalisaa niyadjab, oo ka sii xumaato, lumiyo dhammaan muruqyada. Qaar ka mid ah takhaatiirta PCT si ay u tixgeliyaan waa Nolvadex iyo Clomid.
Halkan waa tusaale tusaale ah oo ah heerka caadiga ah ee loo yaqaan "Trenbolone enanthate cycle" oo leh xargo ku habboon;
1-7 400mg / toddobaad 750mg / toddobaad -
8-12 400mg / toddobaad 750mg / toddobaad 50mg / eod (maalin kasta)
Week Trenbolone Enanthate Tijaabin tijaabo ah Primobolan
1-10 400mg / toddobaad 200mg / eod 600mg / toddobaad
Baaskiilada Dabiiciga ah
1-10 400mg / toddobaad 1000mg / toddobaad 90mg / toddobaad 600mg / toddobaad
11-12 - 1000mg / toddobaad 90mg / toddobaad -
13-14 - - 90mg / toddobaad -
Isla marka aad ka gudubto wareegga 'Trenbolone enanthate cycle', hubi inaad qaadatid 50mg oo ah Clomid maalintii. Waa inaad ku sii wadataa qiyaasta 21 maalmood ee soo socota. Isla mar ahaantaana, hubi inaad maamusho 20 - 40mg oo ah Nolvadex muddo toban maalmood ah.
Trenbolone enanthate waxaa lagu heli karaa qaabab duritaan ah. Celceliska qiyaasta daawada 'Trenbolone enanthate' waxay u dhaxeysaa 75mg ilaa 100mg, oo ay tahay inaad qaadatid laba jeer usbuucii adoo adeegsanaya muruqyada murqaha ama bowdada. Isle'egtani waxay ka dhigan tahay in qiyaasta toddobaadlaha ah ay ku dhacdo inta u dhexeysa 150mg ilaa 200mg.
Wixii dhexdhexaad ah, waxaad samayn kartaa inta u dhexeysa 200 - 400mg / usbuuc kasta iyada oo aan loo eegin haddii hadafkaagu yahay mid goynaya, qulqulaya, ama helayo xoog.
Inkasta oo 75 - 100mg ay u shaqeyn doonto sixir, ayaa dadka isticmaala horumarsan ay qaadan karaan inta ugu badan 400mg ee hal mar. Haddii qiyaastaada ay ka sarreyso qiimahaas, natiijooyinka raadinta trenbolone waxay ka baxaysaa adduunkan. Si kastaba ha noqotee, dhammaadka dhamaanteed, waxaad u baahan doontaa inaad ku hesho xitaa waxyeelooyinka liddi ku ah.
Tren E budada laguma talinayo in la isticmaalo dumarka. Sababta ayaa ah in daawadani ay soo bandhigto siyaabo aad u sarreeya, taas oo aan si fiican ugu habboonayn dheelitirka hormoonka haweenka. Qaado, tusaale ahaan; Dumar-qaadista ayaa laga yaabaa inuu ku dhaco calaamadaha sida kintirka mudnaanta leh.
Daawadani waxay awood u leedahay bilowga iyo kuwa isticmaala steroid dhexdhexaad ah. Ahaanshaha shan jeer anabolic ka badan testosterone, Trenbolone wuxuu ku habboon yahay jir-dhiseyaasha adag. Haddii aad bilaabayso, waa inaad iska hubisaa heshiisyo gaar ah oo ka socda Aasraw Trenbolone acetate alaab-gacmeedyada.
Saameynaha Sidee Loo Helaa Trenbolone Enanthate
Dhibaatooyinka soo raaca ee jirka ee jirka la dhigo waxay ku xiran tahay dhowr arrimood. Tusaale ahaan, qiyaasta sare ee qiyaasta jirka, jidhkaagu aad ugu nugul yahay calaamadaha. Ka sokow, dadku way ka duwan yihiin. Hal qof ayaa hilibkiisa u noqon kara mid kale, waad ogtahay.
Hurdada iyo hurdada qallafsan
Kordhinta cadaadiska dhiigga
Dhidid dhidid habeenkii
Heerarka hoose ee testosterone
Qanjirka 'prostate' (hargabka xun ee prostatic hyperplasia)
Koritaanka aan caadi ahayn ee timaha
Khatarta ginecomastia sababtoo ah prolactin
Sida looga fogaado Saameynaha Sidee Loo Helaa Trenbolone Enanthate
Qaar ka mid ah saameynta daaweynta kor ku xusan ee trenbolone ayaa ah mid la maamuli karo. Qaado, tusaale ahaan, haddii aad gebi ahaanba u nugul tahay sifooyinka asrogenic sida finanka ama xayawaanka malabka, waa in aad dib u celisid adigoo qaadanaya steroid.
Marka aad la kulanto dhidid aad u daran, hubi inaad cabto biyo fara badan si aad naftaada u ilaaliso. Dhamaadka wareegga gawaarida, hubi inaad a PCT si ay u bilaabaan inay bilaabaan heerarka testosterone.
Meel aad u badan oo guriga loo qaato, testosterone waa in ay qayb ka noqotaa qaybta iyo xajmigaaga. Sababta ayaa ah in Trenbolone ay hoos u dhigi doonto joojinta wax soo saarka dabiiciga ah ee testosterone.
Halkee baan ka iibsan karaa steroids ee jirka jirka?
Haddii aad tahay qof jilicsan oo jidhka ah, fursada ayaa ah, su'aasha ugu horeysa ee aad u tagtay, "Xagee baan ka iibsan karaa steroids marka jirka la gashado marka ay sharci darro tahay?"
Qaado neef qoto dheer oo horay u akhri sababta oo ah waxaan dillaacnay halxidhaha.
-Gadashada Trenbolone Enanthate
Gobolada intooda badan, Trenbolone iibinta iyo derbiyadoodu waa sharci darro. Wax soo saarista iyo iibsiga steroidka ah maaha wax loo adeegsado labadaba isticmaalka caafimaadka xoolaha iyo rugta caafimaadka. Sidaa darteed, haddii aad rabto inaad dalbato qaar ka mid ah nidaamka jirdhiska jirka, waa inaad isticmaashaa suuq madow.
Tusaale ahaan, Maraykanka, FDA ayaa soo jiidatay fiilada ku saabsan wax soo saarka, isticmaalka, iyo lahaanshaha lahaanshaha. Laga soo bilaabo xaddidaadkan, waxaad si dabiici ah u soo gabagabeyn kartaa in shirkad dawo ah oo ku taal Maraykanka aysan haysan ogolaanshaha FDA si loo soo saaro steroidkan. Si kastaba ha noqotee, haddii ay tahay inaad sameyso soo dejin sharciyeed, hubi inaad tahay qof xoolaade ah oo cilmi baaris ah ama cilmi baaris.
In kasta oo Tren E uu sharci darro ka yahay Mareykanka, Ingiriiska, Australia, iyo Kanada, haddana waddamada Bariga Dhexe iyo Afrika badankood wax dammaanad ah kama aysan bixin nidaaminta isticmaalkeeda. Kanada gudaheeda, waa daroogada Jadwalka IV ee hoos timaada Sharciga Maandooriyaha La Xakameeyay. Waad ka faa'iideysan kartaa fursadda oo waxaad raadin kartaa alaab-bixiyeyaasha budada trenbolone acetate sida www.aasraw.com.
Si ka duwan labada kale ee kala duwan ee Trenbolone, Tren E way adag tahay in la helo. Si kastaba ha noqotee, waxaad dooran kartaa shirkad internet ama saldhigga steroid oo ka socda shirkad tayo sare leh. Si kastaba ha noqotee, hubi inaad tijaabiso asalka ay astaamahaan si aanad uga dhicin wax cillad ah oo aan la isticmaalin.
Sicir bararka Trenbolone wuxuu ku xiran yahay dhowr arrimood. Tusaale ahaan, iibsashada alaab bixiyeyaasha maxalliga ah waxay noqon kartaa mid si qaali ah uga qaalisan iibsiga dukaanka internetka. Intaa ka sokow, soo-saaraha kasta wuxuu leeyahay qiimaha qiimaha.
Qiyaasta celcelis ahaan, shaashadda 10ml ee Tren E waxay u dhexeysaa $ 75 iyo $ 130 si loogu xoojiyo 200mg.
-Soo iibso Tren E Online
Steroidska iibka waa adagtahay in la yimaado, sababtoo ah sharciyada adag ee FDA. Haddii aad tahay qof jilicsan oo ka mid ah calaamadaynta jirka, waa inaadan waligaa ku kalsoonayn dhammaan shayada dhulka hoostiisa ah ee ku andacoonaya in ay soo saaraan darajo sare. Uma baahnid inaad halis galiso noloshaada iyadoo tixgelinaysa in qaar ka mid ah ay soo saaraan xayndaabkooda oo leh koontarool tayo leh oo aan lahayn xeer.
Su'aasha ku xigta ee maskaxdaada waa inay noqotaa, "Halkee baan ka iibsan karaa steroids ee jirka?" Waa hagaag, waan kuu sharxi doonaa. Dukaanka internetku waa mid ku haboon tan iyo markii uu kaydiyo labada iyo wakhtigaaga.
Hubso inaad isbarbar dhigto qiimaha Trenbolone ee u dhexeeya iibiyeyaasha kala duwan, hubi qiimeynta alaab-qeybiyaha, iyo dabacsanaanta rarka. Ka sokow, websaydhku waa inuu bixiyaa qayb ka mid ah macluumaad dhammaystiran oo ku saabsan Tren E. Macluumaadkan waxaa ku jira faa'iidooyinka, dhibaatooyinka trenbolone, qiyaasta, iyo sida loo maareeyo dhibaatooyinka soo raaca.
Trenbolone Enanthate Recipe Recipe
Inkasta oo aad ka iibsan kartid alaabada diyaar-u-sameynta ah, waxaad weli iibsan kartaa budada Tren E Chem oo cayriin ah iyo soo qaado qashinkaaga la rabo. Habkani ma aha oo kaliya la awoodi karo, laakiin sidoo kale habka ugu wanaagsan ee loo habeeyo qiyaasta daawada Trenbolone.
100ml ee 100mg / ml, waxaad u baahan doontaa;
10g (7.5ml) ee budada Trenbolone E
10ml ee Benzyl Benzoate (10%)
2ml ee khamriga benzyl (2%)
80.5ml ee canabka, sisinta, ama saliidda qumbaha
100ml ee 200mg / ml, waxaad ubaahan tahay;
20g (15ml) ee budada Trenbolone E
15ml ee Benzyl Benzoate (15%)
68ml oo saliid ah (sisinta, canab, ama saliidda qumbaha)
Trenbolone Enanthate wuxuu ka mid yahay kuwa xoogan anabolic steroids for sale ee warshadaha jirka. Xaqiiqada ah in ay shan jeer ka xoog badan tahay testosterone macnaheedu waa in daroogadu ay tahay aag aan loo tagin haweenka. Fikrad ahaan, kaliya qaado haddii aad tahay user steroid khibrad leh.
Iyadoo la tixgelinayo in uu leeyahay nolol nus-nus ah, hubi inaad isticmaasho marka aad u socoto wareegyada dheer. Waxa ugu weyn waa inaad adigu u isticmaali kartaa steroids anabolic si aad u gaarto hadafyo kala duwan. Waxaad rabtaa inaad hesho xoog, adigoon kor u qaadin, ama jarin miisaankaaga; Tren E wuu qaban doonaa.
Miyaad la yaabban tahay sababta budada Trenbolone E ay u egtahay "steroid" anabolic steroid ah? Waa hagaag, waa sababta oo ah dhismuhu wuxuu leeyahay nolol badhkeed oo wuxuu ku sii jiri doonaa nidaamka muddo dheer kahor intaan la tirtirin. Xitaa markii arrimo khaldan ay soo baxaan, isticmaaluhu wuu joojin doonaa qiyaasta, laakiin saameyntu wali way sii jiri doontaa labada toddobaad ee soo socda.
William Llewellyn, Nafaqada Molecular, Anabolics, Pages 491 - 499, 618, 724, 2011.
Wilson, VS, Lambright, C., Ostby, J., Gray Jr, LE, In Vitro iyo In Vivo Saameyntii 17beta-Trenbolone: ​​Hantidhowlaha Waxtarka leh ee Nadiifaha ah, Sayniska Takhasuska, 2002.
Xirmooyin, JF, McCoy, SC, Borst, SE, Xoqitaannada Saxarada iyo Isticmaalka Xaaladaha Qalliinka ee Trenbolone: ​​Muhiimad Isugeyn ah oo Anabolic ah oo leh Dhaqdhaqaaqa Androgenic iyo Estrogenic ee Yar, Daabacaadda PubMed, Online, 2010.
Ojasoo, Raynaud., Dareemayaasha Steroid ee Dareemayaasha ee Daraasadaha Daraasaadka, Cilmi-baarista Kansarka, 1978.
Root Isotretinoin (Accutane) ee finanka: Daweynta finanka leh Isotretinoin Steroidska ugu xoogan ee Methasterone (Superdrol) Prohormone